ပျောက်သွားတဲ. အမှိုက်ပုံးကြီး ပြန်တွေ.ပြီတဲ.။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပျောက်သွားတဲ. အမှိုက်ပုံးကြီး ပြန်တွေ.ပြီတဲ.။
ပျောက်သွားတဲ. အမှိုက်ပုံးကြီး ပြန်တွေ.ပြီတဲ.။
Posted by ster on Jun 30, 2012 in Copy/Paste | 46 comments
ဇွန်လ(၁၈)ရက်က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနဲ. နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်း ထောင်.မှာ စည်ပင်က ချထားပေးတဲ. ကျပ် ၃၅၀၀၀ဝ တန် အမှိုက်ပုံးကြီး ပြန်တွေ.ပြီလို. ဒီနေ. မြန်မာ.အလင်း သတင်းစာ မှာဖေါ်ပြထားတာတွေ.ရပါတယ်။
အရင်နေရာမှာ ပြန်ထားသွားတာတော. မဟုတ်ဖူးတဲ.။ ဘာလိုနည်းနဲ.ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လာထားသွားတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။ သေးသေးကွေးကွေးလဲ မဟုတ်၊ ဘယ်လိုယူပြီး ဘယ်လိုပြန်လာထားသွားလဲတော. မသိဘူး။ YCDC လို.ရေးထားတာကို ဖျက်ထားပြီး၊ သေချာသန်.စင်ပြီးမှ ပြန်လာထားသွားတာ ဆိုတော. ရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းသွားတာ ထင်တယ်။
အများသန်.ရှင်းရေးအတွက် မကူညီနိုင်တောင် မဖျက်ဆီးသင်.ဘူးလို. သိသွားခဲ.တာဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။
၃၀.၀၆.၂၀၁၂ နေ.ထုတ် မြန်.မာ.အလင်းသတင်းစာ
ကျွန်တော်လဲ ကိုစိန်ဗိုက်ဗိုက်တော. မဟုတ်လောက်ဘူးလို. ထင်ပါတယ်
ယူသွားသူက —- ကိုဗိုက်
ရည်ရွယ်ချက်က —- ဘီအီးဖိုးမရှိလို့
သွားရောင်းတော့ ဝယ်မဲ့ဘော်တယ်ပြည်တွင်းနေမြန်မာမွှတ်စလင်များက YCDC ဆိုတာကြီးပါနေတော့ —- လက်မခံ
ဒါနဲ့ကိုဗိုက်လည်း YCDC ကြီးကိုဖျက်ပြီး ဘော်တယ် ပြည်တွင်းနေမြန်မာမွှတ်စလင်များဆီကို —- နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားရောင်း
ဘော်တယ်ပြည်တွင်းနေမြန်မာမွှတ်စလင်များကလည်း 6/1 ကိုလန့်လို့ —- ထပ်ပြီးလက်မခံ (ငေါက်တောင်လွှတ်)
ဒါနဲ့ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး —- မူလဘူတနေရာ ပြန်လာထား
မှက်ချက်—ကျွန်ုပ်သည် “ကုလား” ဟုလုံးဝမသုံးပါ။
ဗျစ်ဗျစ်နဲ့အဝေမတဲ့လို့ပြန်ထားလိုက်တာ
ပြန်ထားသွားတာ စိန်ဗိုက်ဗိုက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ယူသွားတာ စိန်ဗိုက်ဗိုက်ပေါ့.. ဟဲဟဲ
(ဂိန်ဂိန် ရှိုဒါဂို လိင်တူချစ်တူရီးကို ခလက်ဒစ် ပေးဘာဒယ်..)
မနေ့က for info လာသွားတယ် … ရေတောင်ပြန်ဆေးပေးထားတယ်ဆိုပဲ … သန့်ှရှင်းရေးလုပ်းပေးတာထင်တယ် …:P
တော်သေး သပေါ့ဗျာ ပြန်လာထားသွားလို ့။ဟီး
အင်း ညစ်ပတ်နေလို့ မမြင်နိုင်သူတယောက်ယောက်က
ရေဆေးပေးရအောင် အမှိုက်ပုံးကို ခဏယူသွားတာနေမှာပါဗျာ
အဲဒါကို စွတ်ပြီး အပြစ်တင်စောနေတာ:P
ဟုတ်မယ် ma haw ရေ၊ စေတနာကို တလွဲထင်မိတာ ဖြစ်မယ်။
အများသုံးမှန်း သိသာနေတဲ.ဟာ မဝယ်ရဲလောက်ကြဘူး ထင်တယ်။
( ကျုပ်တို့မြန်မာတွေအသိတရားရှိလာပြီ )
ဒီလိုနီးစပ်ရာမှာ ပြန်ထားပေးတယ်ဆိုတော. အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုရေ။
တော်သေးတာပေါ့ သူ့အသိစိတ်ဓါတ်ရှိရှိနဲ့ ပြန်လာထားသွားလို့ ။
မထားလို့ စခန်းကမိလျှင် တိုင်ချက်ဖွင့်ဖမ်းခံထိတော့မှာ ။
အခုလိုကျတော့လည်း မီဒီယာတွေက ထိရောက်သား ။
ထင်တာတော့.. ဒီကိစ္စ သတင်းစာထဲ ထည့်လိုက်တော့ ရောင်းတဲ့ လူက ရောင်းပေမဲ့ မဝယ်ရဲကြပဲ အဖမ်းမခံရအောင် ပြန်သွားထားလိုက်တာ အေးပါတယ်လို့ တွေးလိုက်ပြီး ပြန်ထားတာ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သတင်းစာရဲ့ ပေါက်ရောက်မှုလို့ ပြောလို့ ရတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီလိုပဲထင်မိခဲ.ပါတယ်၊ ဒါပေမယ်. နီးနီးစပ်စပ် လူမြင်ကွင်းမှာ ပြန်လာထားသွားတာကတော. တမျိုးနော်။
ဒီပုံးကြီး ဘယ်နေရာသွားရောင်းမလဲ…ဘယ်မှာရောင်းရောင်း သိမှာပဲလေ…မစဉ်းစားတတ်လို့ကို ယူသွားတာဖြစ်မှာ…
တစ်ဖက်ကတွေးပေးလိုက်ပါမယ်..ညစ်ပတ်နေတဲ့အမှိုက်ပုံးကို ဆေးပေးချင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါမယ်.. နာမည်မကြီးချင်လို့ တိတ်တိတ်လေးပဲ ယူသွားတာနေမှာပေါ့…
တကယ် ရောင်းမယ် ဆိုရင် လုံ့လ ထားပြီး အပိုင်းပိုင်းခုတ် ရမှာပေါ့.. ပြိးတော့ ဖြတ်စ ညှပ်စ တွေ အနေနဲ့ အချိန်နဲ့ ရောင်းမယ် ဆိုရင် ရောင်းစားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံတွေ ရှိတယ်နဲ့တူပါ့…… ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အင်းလေ စေတနာနဲ့ ဆေးကြောပေးတာကို ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကြတာ။ ဟွန်း ဘယ်လိုလူတွေမှန်းမသိဘူး။
ကျေးဇူးတောင် တင်ရမလိုလို ..
အိတုန်ကို ဆုချရမယ် ခင်ဗျ
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ma etone ရဲ. post က ထိရောက်သား။
ပြန်လာပို့တယ်ဆိုတော့ တော်တော်ရတြာကောင်းလို့ ထင်ပ….။
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါတယ် အပျက်တင်မစောကြပါနဲ့လို့။ သူခမျာ အမှိုက်ပုံးတွေသန့်ရှင်းရေး လိုက်လုပ် ပေးနေတာများလားမှမသိတာ။ :-)
ဟုတ်တယ်နော်၊ နောက်ပုံးတွေ မလုပ်ပေးပဲနေလိမ်.မယ်။
ခိုးသွားတဲ့သူတော်တော်လေးအောက်တန်းကျတယ်နော် မပြောချင်တော့ပါဘူး သူများက တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေး မြို့တော်လှပအောင်ထားပေးထားတဲ့အမှိုက်ပုံးကို တော့ခိုးသင့်ပါဘူးနော် ။
ခိုးဖို ့ဆိုတာမလွယ်သလို၊ပြန်ပို ့ဖို ့လည်းအတော်ခက်တာ။
ဒီလို မလွယ်၊ ခက်တဲ့ ကိစ္စကို ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ
ခိုးသွားတာ လွယ်သလောက် ပြန်ပို ့တာခက်မယ် တွေးမိတယ်။
သူ ့ခမျာ ပြောင်စင်အောင် ဆေးပေးထားရတာ။ဟီးးး
ဖြဲမနဲ့ တောက်တဲ့ တို့နှစ်ယောက် ဟိုတစ်နေ့က တွန်းသွားတဲ့ပုံးကြီးနဲ့ တူလိုက်တာအေ….
ဘယ်လိုပဲပြောပြော “မလိမ္မာ တစ်ခါမိုက်” ဆိုတာ ရှိတယ်မဟုတ်လား။
ပိုင်ရှင်အမည်ကိုတောင် ဖျက်ထားလို့ ဆေးပေးချင်တဲ့ စေတနာထက် သူအသုံးချချင်တဲ့ စိတ်သာရှိပြီး ပိုင်ရှင်မသိအောင် ခိုးယူတာဘဲ။
(ဆေးပေးချင်ရင် “YCDC” အမည်ရေးထားတာကိုဖျက်ဖို့မှ မလိုတာဘဲ)။
ခိုးမိလို့ မှားတဲ့ အပြစ်ကို ညစ်ပတ်နေတဲ့ အမှိုက်ပုံးကြီးဆေးပြီးပြန်ထားပေးတာ တော့ သူ့စိတ်ဓါတ်ကို ချီးကျုးပါတယ်။
နေရာမှန်ပြန်ရာက်အောင်မပို့နိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုတော့ မတတ်နိုင်လို့ နေမှာပါ။
ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော သူ့စိတ်ထဲတော့ဆေးပြီး ပြန်ထားပေးလိုက်ရလို့ တော်တော်ရှင်းသွားမှာဘဲ။
အခု သတင်းတွေထဲပါလါတော့ ကြောက်လို့ ပြန်ထားတာဖြစ်မယ်..။
ဟိုး.. အရင် အစဉ်အဆက်ကတည်းက
ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ အများပိုင်ပစ္စည်းတွေကို လစ်ရင်လစ်သလို အိမ်ယူသွားပြီး သုံးနေကျပါပဲ..။
ကျော့် အနေနဲ့ (အခုက စသုံးနေပီနော် ကျွန်တော်အစား) ကျုပ်ဆိုတာ နည်းနည်းရင့်တယ် ထင်လို့
ဒီပုံးကို တမင်သက်သက် ယူသွားတာပါ မှတ်မှတ်သားသား ဖြစ်စေချင်လို့
အောက်ခြေမှာ သုံးရတဲ့ သူတို့ပစ္စည်းတွေကို လူရှိန်အောင် ဈေးနှုန်းကြီးကြီး ကပ်တပ်တဲ့ စည်ပင်ရဲ့ သောက်ကျင့်ကို သောက်မြင်ကတ်လို့ပါ
၁ဝစုနှစ် တခုလောက် မော်ဒယ်အောက်နေတာတောင်မှာ သူတို့ရေးကပ်ထားတဲ့ဈေးက ၂၀၃ဝလောက်မှာထွက်မဲ့ လမ်းကြိတ်စက်ရဲ့ ဈေးထက် နည်းနည်းများနေပါသေးတယ်။
ဒီအမှိုက်ပုံးလဲ ယိုးဒယားဖြစ် PVC အကောင်းစား ရေတိုင်ကီတောင် သူ့လောက်ဈေးမရှိတာကို တရုတ်ဖြစ် သောက်စုတ်က သိန်းချီ
ရေးကပ်ထားလို့ပါ ဒါတောင် အမှိုက်လှည်းတဲ့ တံမြက်စည်းက အလုပ်သမား သူ့အိမ်က ယူလာလို့ စည်ပင်ကများ သူ့ဘက်ဂျက်နဲ့
ချပေးရရင် တံမြက်စည်းတချောင်းကို ဒေါ်လာ ၁၅ဝလောက် သတ်မှတ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒါမို့ ကျော့် တပည့် ယာကူဇာစိန်ဗိုက်ကို လှမ်းဖုန်းဆက်ပီး မှတ်လောက် သားလောက်အောင် ဈေးနှုန်းနဲ့ တံဆိ်ပ်ကို ကျော်ဖျက်ခိုင်း လိုက်တာပါ ဒါကို အလိုက်မသိတဲ့ ဟိုဆီချေး ခေးမက ပို့စ်တင်လိုက်လို့ ပြန်ထားပေးလိုက်ပါတယ်………………။
အနှောင့်ယှက်ပေးမိလို့ ကျော့်ကို ခွှင့်လွှတ်ပါ
အမှိုက်ပုံးပျောက်တဲ့ ရက်တွေမှာ စည်းကမ်းတကျ အမှိုက်မပြစ်ရလို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြတဲ့ မြန်ဗာ(ကိုကိုသိန်းနဲ့ မာမီစု ကြားညှိ အခေါ်အဝေါ်) နိူင်ငံကြီးသူ မြန်ဗာ နိူင်ငံကြီးသားများအား ကျော်တောင်းပန်ပါတယ်…. ကျော့်ကို စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့……….
စည်ပင်က မျိုပြအင်ဂျင်(အင်ထုပီး ဂျင်လိုလည်သူတွေ)နီယာများ ကိုသိန်းညွန့် အိုနေပီ ဆိုပီး ဘက်ဂျက်ကို မလှိမ့်တပတ်လုပ် ခွဲစားတာ သတိထားပါ နောက်ဆို လမ်းကြိတ်စက်တို့ ကရိန်းတို့ ကတ်တရာပုံးတွေပါ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်…………………….
ကျော့် ပြောတာကို ကျော်လဲ ထောက်ခံပါတယ်..
မြို့တော်စည်ပင်မှ နောင်အလားတူ ကိစ္စများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် အမှိုက်ပုံးတိုင်းအား CCTV တပ်ဆင်၍ ၂၄ နာရီ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ……
အော်…ခိုးစရာရှားလို. အမှိုက်ပုံးမှ လာခိုးရတယ်လို.ဗျာ
ယူသွားတုန်းက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ပဲ ရှိရှိ အခုလို အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ သူ့နေရာသူ ပြန်ထားပေးတာ ချီးကျူးစရာပါ။
ဒီနေရာမှာ အီတုန်းရေးလိုက်တဲ့ ပိုစ့်ရဲ့ အကျိုးရလဒ်လို့ ပြောရမယ်။
ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အရမ်းနံနေလို့ ယူပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တာပါတဲ့။ ဘာအနံ့မှတောင်မရဘူးဆိုပဲ။
အသေးစိပ်သိလိုသူများ စုံစမ်းနိုင်ပါသည် ဤပေါ်တွင်ပြောမကောင်းပါ